Voice of Myanmar – Page2– Bringing Balance Back To Local News
မြန်မာသတင်း မှုခင်း သတင်း
မော်စကို၊ မေ-၁၉-၂၀၂၂ မျိုးဆက်(VOM) ယူကရိန်းနိုင်ငံ မာရီယူပိုလ်မြို့မှာ လက်နက်ချလိုက်တဲ့ ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးသမား ၉၀၀ ကျော်ကို...
မတ် – ၂၂- ၂၀၂၂ Voice Of Myanmar စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊...
မတ် ၁၈- ၂၀၂၂ Voice Of Myanmar ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးလို့ လူသိများတဲ့...
မတ် ၁၅- ၂၀၂၂ (VOM) မန္တလေးမြို့၊ အမရပူရရှိ တောင်သမာန်အင်းစောင်း တဝိုက်မှာ...
ဆူးငှက် ၁၉၅၀ ဝန်းကျင်၊ မန္တလေး… သင်္ကြန်ပြီးကတည်းက အတွေ့စိပ်လာသော ဂီတပါရမီရှင်လူငယ်လေးတွေက အခုတစ်လော...
ဂျီနီဗာ၊ မေ-၁၉-၂၀၂၂ မျိုးဆက်(VOM) ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ၁၀...
နယူးယောက်၊ မေ-၁၉-၂၀၂၂ မျိုးဆက်(VOM) ယူကရိန်းကို ရုရှားရဲ့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရေရှည်ဖြစ်ပွားဖွယ်ရှိတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာအကြပ်အတည်းမှာ...
မေ ၁၉-၂၀၂၂ VOM (GG) ပဲခူးတိုင်း အနောက်ပိုင်း ၊ ပေါင်းတည်မြို့က...
မော်စကို၊ မေ-၁၉-၂၀၂၂ မျိုးဆက်(VOM) ယူကရိန်းနိုင်ငံ မာရီယူပိုလ်မြို့မှာ လက်နက်ချလိုက်တဲ့ ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးသမား ၉၀၀...
နေပြည်တော် -မေ-၁၉-၂၀၂၂ KT(VOM) နစကဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းမှုမှတဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကို အခုလာမယ့်...
January 10, 2020 Editor Htein Lin 0
ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ပလပ်လိုက်တဲ့အတွက် အောက်ရုံးကချထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းမို့ အထူးအယူခံဆက်တက်မည် နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ ကိုထွန်း (VOM) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီနဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ကို သတ်တဲ့အမှု စီရင်ချက်ကို နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်မိန်. တက်ထားတဲ့အမှုကို ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်တာမှာ အောက်ရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအတည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် အထူးအယူခံ ဆက်တက်မယ်လို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ ဦးကိုနီနဲ့ ဦးနေဝင်းဟာ ၂၉/၁/၂၀၁၇ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ သေနတ်သမား ကြည်လင်းရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေနတ်သမား ကြည်လင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ကြံစည်သူ အောင်ဝင်းဇော်တို့ နှစ်ဦးကို မသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ် သတ်ရန်...
Breaking News မြန်မာသတင်း သတင်း
Breaking News သတင်း
January 21, 2021 Editor Htein Lin 0
နေပြည်တော်-ဇန်နဝါရီ၂၁-၂၀၂၁ ကိုထွန်း(နေပြည်တော်) အိန္ဒိယကမှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် မြန်မာပြည်ရောက်ပြီလို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိုင်းအဝိုင်းကသိရပါတယ်။ ပထမဆုံးရောက်တဲ့ ဆေးတွေကို ရောဂါကူးစက်မှုအနီးစပ်ဆုံးနဲ့ ကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းနဲ့ Volunteer တွေကို အရင် စတင်ထိုးပေးမှာဖြစ်ပြီး နောက်ရောက်တာတွေကို အသက် ၆၅နှစ်အထက်တွေကို ထိုးပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုဗစ်၁၉ကာကွယ်ဆေးတလုံးဟာ အမျိုးအစားလိုက်ပြီး တချို့ဆေးဟာ လူ၈ဦးထိုးလို့ရပြီး တချို့ကတော့ ၁၀ ဦးထိထိုးပေးလို့ရပါတယ်။...
Breaking News ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား မြန်မာသတင်း သတင်း
ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က အပြီးသတ် အမိန့်ချမယ် နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီနဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ကို သတ်တဲ့အမှု စီရင်ချက်ကို နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်မိန်. တက်ထားတဲ့ကိစ္စ ၁၀/၁/၂၀၂၀ မနက် ၉း၃၀နာရီ မှာ နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာ အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဒီအမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေအသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။ ဦးကိုနီနဲ့ ဦးနေဝင်းဟာ...
December 30, 2020 Editor Htein Lin 0
December 24, 2020 Editor Htein Lin 0
December 13, 2020 Editor Htein Lin 0
မြောက်ကိုရီးယားမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဖို့ ဂျင်းပြုတ်ရေအပါအ၀င် တိုင်းရင်းဆေးတွေအသုံးပြုနေကြ
ရုရှားရေတပ်ကိုခြေမှုန်းဖို့ အဆင့်မြင့်သင်္ဘောဖျက်ဒုံးကျည်တွေ ယူကရိန်းကိုပေးဖို့ စီစဉ်နေ
ကမ္ဘာ့သတင်း မြန်မာသတင်း သတင်း
August 5, 2020 Editor Htein Lin
လူငယ်ထိမ်းသိမ်းရေးကျောင်းက ဒုတိယမြောက် ကလေးတယောက် ထပ်မံသေဆုံး
ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်ဆုံးမရာ လက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွား၊ ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီး
မေ ၂၀-၂၀၂၂ KK(VOM) ရေကြည်မြို့နယ်၊ အသုတ်မြို့မှာ သမီးဖြစ်သူကို ရိုက်နှက်ဆုံးမရာကနေ လက်လွန်ပြီးသေဆုံးသွားလို့ ဖခင်ဖြစ်သူကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။ အသုတ်မြို့၊ ထန်းကျွန်းဆိပ်သာအုပ်စု၊ ဆိပ်သာကျေးရွာမှာ မနေ့ မေလ ၁၉ရက် ညနေပိုင်းက ဦးစိုးလွင်ဦးဆိုသူက အသက် ၁၆နှစ်အရွယ်ရှိ သမီးဖြစ်သူ မစုပုံချစ်ကို ရိုက်နှက်ဆုံမရာကနေ လက်လွန်ပြီး သေဆုံးသွားတာကြောင့် ဖဖ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကျေးရွာနေသူတဦးက ပြောပါတယ်။ “သူ့သမီးနဲ့စကားများပြီး သူ့သမီးကိုရိုက်တာ၊ ကောင်မလေးက အိမ်ရှေ့ကို ထွက်ပြေးပြီး လဲကျသွားတယ်၊ ပြီးတော့ အသက်မရှိတော့ဘူး”လို့ သူကပြောပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဥ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့နီးစပ်သူတဦးက”ဖြစ်စဥ်ကမှန်ပါတယ် ၁၈ ရက်နေ့ ညနေကဖြစ်တာ၊ သူအဖေက ဝါးနှီးစိတ်နဲ့လည်းရိုက်တယ် ဖိနပ်နဲ့လည်းရိုက်တယ် လက်နဲ့လည်းရိုက်တယ်၊ အဲ့ဒါကြောင့် ကောင်မလေးသေသွားတာ”လို့ ပြောပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူရိုက်နှက်မှုကြောင့် သမီးဖြစ်သူမှာ ဝဲဘက်ပါးဖူးရောင် ဒဏ်ရာ၊နှာခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာ တွေနဲ့အတူ သေဆုံးသွားပြီး ရုပ်အလောင်းကို…
စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ နယ်မြေမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသက တောင်သူတွေ သီးနှံရိတ်သိမ်းပြီးပေမယ့် သွားရောင်းဖို့အခက်ခဲရှိနေ
မေ ၊ ၂၀-၂၀၂၂ SP (VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ကလေးမြို့နယ် တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ပဲစိုက်တောင်သူတွေဟာ သီးနှံတွေ ရိတ်သိမ်းပြီးတာ ၂ လကျော်ရှိနေပြီး တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာနဲ့ လမ်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက် ရိတ်သိမ်းသီးနှံတွေ စျေးကွက်ထဲအရောက်သွားဖို့ အခက်တွေ့နေရတယ်လို့ ကလေးဒေသခံ ပဲစိုက်တောင်သူတွေဆီက သိရပါတယ်။ ” ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း ထောက်ကြံ့ရွာကနေ ဂန့်ဂေါ-ဟားခါး-ကလေး လမ်းခွဲအထိ လမ်းတွေပိတ်ထားတယ် သွားလာလို့ မရဘူး ၊ လမ်းပိတ်တာက တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်တယ် ၊ မတ်လထဲက ပဲတွေရိတ်သိမ်းထားပြီးပြီ ၊ မီးရေးထင်းရေး စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် စျေးကွက်ကို အရောက်ပို့ချင်ပေမယ့် လမ်းတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေရတာ၊ နှစ်တိုင်းကတော့ ပွဲစားတွေ ရွာအရောက် ဆင်းလာပြီး ရာသီပေါ်သီးနှံတွေ ဝယ်တယ် ၊ ဒီနှစ်မှာက တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အဲ့ဒီလို ရွာတွေကို ဆင်းပြီးဝယ်တာ မရှိတော့ဘူး ၊ မကြာခင် ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မှာမို့ ၊…
ပေါက်မြို့နယ် မီးသတ်ရုံးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး အဖမ်းခံရ
မေ ၊၂၀-၂၀၂၂ SP(VOM) မကွေးတိုင်း ၊ ပခုက္ကူခရိုင် ၊ ပေါက်မြို့၊ အောင်တံခွန်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ပေါက်မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကို ဒီကနေ့ မနက် ၆ နာရီဝန်းကျင်က စစ်သားနဲ့ ရဲတွေက လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ မီးသတ်အသိုင်းအဝိုင်းဆီက သိရပါတယ်။ ” ဒီမနက်ပိုင်းက ရုံးကိုလာဖမ်းသွားတာပါ ၊ ဘာကြောင့် ဖမ်းရတယ်ဆိုတာ မေးလို့မရဘူး ၊ ဘယ်မှာ ချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတာ အခု နေ့ခင်းပိုင်းအထိ မသိရသေးဘူး ၊ မိသားစုတွေက လိုက်လံ ဆက်သွယ်နေပေမယ့် အခုထိတော့ ဆက်သွယ်မရလို့ စိတ်ပူနေကြတယ် ” လို့ မီးသတ်အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကတော့ ဒုတက ဟိန်းချစ်အောင် ၊ တသ စည်သူကျော် ၊ တက ရဲဝင့်ကိုကို၊…
အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့ ပစ်ခတ်ခံရပြီး ၃ ယောက်သေဆုံး
မေ ၂၀-၂၀၂၂ GG(VOM) ညောင်ဦးမြို့နယ်က ကျေးရွာတစ်ခုမှာ အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့ သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရလို့ ၃ ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ မနေ့ မေလ ၁၉ ရက်နေ့ က ညောင်ဦးမြို့နယ် အောက်ညဥ့်ရွာက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးစန်းရေဟာ သူရဲ့ နေအိမ်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်နေချိန် သေနတ်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ” မနေ့က နေ့လယ် ၁၂ နာရီလောက်မှာ အစည်းဝေးလုပ်ချိန်ဝင်ပစ်ခံရတာလို့သိရတယ် ၊ဒဏ်ရာရသူတွေကိုညောင်ဦးဆေးရုံခေါ်သွားတယ်တဲ့၊ သေတဲ့ ၃ ယောက်ထဲ အုပ်ကြီးမပါဘူးလို့ကြားတယ်၊အသေးစိတ်အခြေအနေကတော့မသိရသေးဘူး ” လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ သေနတ်ပစ်ခံရပြီး သေဆုံးသူတွေကတော့ ခိုင်ဇော်၊ကျော်ကျော်မင်း၊ မောင်မြင့်ဆိုသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး သက်ဆိုင်ရာက အမှုဖွင့်ဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြေလတ် PDF ၊ TTA ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့၊ Seven People Defense Force(S.P.D.F)၊ Bagan Heros…
စစ်တွေမှာ အနဂ္ဃ​​ ရတနာမြေ “မြောက်ဦး” ဓာတ်ပုံပြပွဲ ပြုလုပ်
မေ ၂၀-၂၀၂၂ SW(VOM) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၊ ဦးဥတ္တမခန်းမမှာ ပြည်နယ်​ကောင်စီနဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနတို့က အနဂ္ဃရတနာမြေ “မြောက်ဦး”ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲကျင်းပရတာဟာ ရှေးဟောင်း မြောက်ဦးမြို့ကို ကမ္ဘာ့အမွေအနစ် (UNESCO)ဝင်နိုင်ရေး ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး ၂ ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာ မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှု အမွေအနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၁၃၀ နီးပါးပါဝင်ပြီး လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရင် ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာ မြောက်ဦးမြို့အကြောင်းကို မိနစ် ၂၀ကြာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနောက်ခံအသံဖတ်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းဖိုင်ကို ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ဦးမြို့ကို ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဝင်ရောက်နိုင်ရေး ၂၀၂၁ ခုနှစ်က အဆိုပြုလွှာမူချောတင်သွင်းခဲ့ပြီး လာမယ့်နှစ်မှာ UNESCO က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလကလည်း အနဂ္ဃ ရတနာ မြေ…
ပြုံးယမ်း၊ မေ-၂၀-၂၀၂၂ မျိုးဆက်(VOM) ထိရောက်တဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးတွေအသုံးမပြုသေးတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ ပြည်သူတွေကြားမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ မြောက်ကိုရီးယားဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီး နိုင်ငံနယ်စပ်တွေကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိချိန်ထိ ကာကွယ်ဆေးပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကို ပယ်ချထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်းဖျားနာခြင်းမရှိသူတွေအတွက် ဂျင်းပြုတ်ရေနဲ့ ပျားရည်ရေနွေးအပါအ၀င် ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ ကုသဖို့ အာဏာရပါတီရဲ့ ရိုဒေါင်ဆင်မွန် သတင်းစာက အကြုံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းဟာ လည်ချောင်းနာခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးခြင်းကဲ့သို့ အချို့သော ကိုဗစ်လက္ခဏာအချို့ကို သက်သာစေနိုင်ပြီး လူနာတွေမှာ ပုံမှန်ထက် ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ဂျင်းပြုတ်ရေကတော့ ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ နာကျင်မှုကို သက်သာစေပေမယ့် ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကုသတဲ့ ဆေးနည်းတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတော့ နေ့ရောညပါ ဆားရေးနဲ့ပလုတ်ကျင်းဖို့ အကြံပြုထားတဲ့ စုံတွဲတတွဲကို မကြာသေးမီက အင်တာဗျူး ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်…
ခင်ဦးမြို့ပေါ်က နာမည်ကြီးစတိုးဆိုင် ဓားပြတိုက်ခံရ
မေ ၊ ၂၀-၂၀၂၂ SP(VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ရွှေဘိုခရိုင် ၊ ခင်ဦးမြို့ ၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အနီးမှာရှိ စားသောက်ကုန်နဲ့ စတိုးဆိုင်ဟာ မနေ့က ၊ ညနေပိုင်းမှာ ဓားပြတိုက်ခံရပြီး ဆိုင်ထဲရှိ ပစ္စည်းတွေ ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ ခင်ဦးမြို့ခံတွေဆီက သိရပါတယ်။ ” သေနတ်တွေကိုင်ထားတဲ့ လူငယ် ၁၀ ယောက်ကျော်က ဟန်နီစတိုးကို ဓားပြတိုက် လုယက်ဖျက်ဆီးသွားတာ ” လို့ အဲ့ဒီစတိုးဆိုင် အနီးဝန်းကျင်က ပြောပါတယ်။ သေနတ်တွေကိုင်ပြီး စတိုးဆိုင်ထဲဝင်ရောက်လာသူတွေက ကောင်တာထဲက ပိုက်ဆံ သိန်း ၂၀ ကျပ် ၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်း ၂ လုံး ၊ ဆိုင်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ကွန်ပျူတာဘောက်တွေကို ယူဆောင်ပြီး ဆိုင်ထဲက မှန်ကောင်တာတွေနဲ့ စျေးကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်…
ကိယက်ဗ်၊ မေ-၂၀-၂၀၂၂ မျိုးဆက်(VOM) ရုရှားရေတပ်ရဲ့ ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကို ချေမှုန်းရာမှာအထောက်အကူဖြစ်ဖို့အတွက် အဆင့်မြင့်သင်္ဘောဖျက်ဒုံးကျည်တွေ ယူကရိန်းကိုပေးဖို့ အမေရိကန်က စီစဉ်နေကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရုရှားစစ်သင်္ဘောတွေကို နစ်မြုပ်စေမယ့် ပိုမိုအားကောင်းတဲ့လက်နက်တွေကြောင့် ယူကရိန်းပဋိပက္ခ ပိုမိုဆိုးရွား ပြင်းထန်လာမှာကို စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ယူကရိန်းဟာ လက်ရှိလက်၀ယ်ရထားတဲ့ အမြောက်တွေ၊ ဂျာဗလင် နဲ့ စတင်းဂါးဒုံးကျည်တွေနဲ့ အခြားလက်နက်တွေထက် ပိုမိုအစွမ်းထက်တဲ့ အမေရိကန်ဆီက လက်နက်တွေ လိုချင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ အမေရိကန်ဟာ ယူကရိန်းအတွက် ဘိုးအင်းကထုတ်လုပ်တဲ့ Harpoon ဒုံးကျည်၊ ကောင်စ်ဘာ့နဲ့ ရေသီယွန်တို့က ထုတ်လုပ်တဲ့ Naval Strike Missile စတဲ့ အစွမ်းထက်ဒုံးကျည်နှစ်မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်တာ၀န်ရှိသူ သုံးဦးနဲ့ လွှတ်တော်အမတ် နှစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအစွမ်းထက်ဒုံးကျည်တွေကို ယူကရိန်းကို တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် အဲဒီဒုံးကျည်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဥရောပမဟာမိတ်တွေကတစ်ဆင့် ပေးဖို့နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သတင်းရင်းမြစ်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ယူကရိန်းအတွက်…
ပြည်မြို့မှာ ဒုရဲအုပ် သေနတ်ပျောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ အမျိုးသား စစ်ဆေးနေစဉ် သေဆုံး
မေ ၂၀-၂၀၂၂ GG(VOM) ပြည်မြို့က KTV တစ်ခုမှာ ဒုရဲအုပ်တဦးရဲ့ သေနတ်နဲ့ကျည် ၊ဖုန်းအပါအဝင် ငွေတွေ ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ အမျိုးသားတဦး မနေ့ မေလ ၁၉ရက်က သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ် ။ ဖမ်းဆီးခံရသူကတော့ ဒုရဲအုပ် ရဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ခဲ့တဲ့ Spider KTV ဆိုင်က စားပွဲထိုး ဝန်ထမ်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ” မနေ့က ပြည် အမှတ် ၂ ရဲစခန်းမှာပဲ စစ်နေရင်းဆုံးတာလို့ကြားတယ် ၊ ဖမ်းခံရတာက KTV ကဝန်ထမ်းပဲ၊သူက ပစ္စည်းတွေယူပြီး ထွက်ပြေးသွားတာလို့ကြားတယ်။လူကိုဖမ်းမိပေမယ့် ပစ္စည်းတွေတော့ ပြန်မရဘူးလို့သိရတယ် ၊ ပျောက်တဲ့ ဒုရဲအုပ်လည်း ပြန်ဖမ်းထားတယ်လို့တော့ကြားတယ်”လို့ ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း၊…
နေပြည်တော် မေ၂၀-၂၀၂၂ KT(VOM) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ RCSS/SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်ဆစ် တို့အဖွဲ့ဟာ နေပြည်တော်က တပ်မတော်ကစီစဉ်တဲ့နေရာမှာ ၂ နာရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး နစကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို VOM ကဆက်သွယ်မေးကြည့်တော့ ” ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးတဲ့ အနှစ်ချုပ်ကတော့ ကျနော်တို့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေရယ် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖယ်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စ အဲ့နှစ်ချက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက စပြောတယ် အဲ့နှစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျလည်း RCSS ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်း သဘောတူတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အသေးစိတ်ထပ်မံဆွေးနွေးတယ်။ ဒီအကြောင်းအချက်နှစ်ခုပေါ်မှာ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်တွေအပေါ်မှာရော သဘောတူညီချက် တော်တော်များများရရှိခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဥ်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ EAO အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့တွေ့စုံပြီးတဲ့အခါမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဥ်များဆောင်ရွက်မယ့် အချိန်ဇယား (Time Frame) ရေးဆွဲဖို့ အကြံပြုတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ (Time Frame)ရေးဆွဲပြီးတော့ကျ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့…